War Deg Deg Ah: Somaliland iyo Khaatumo oo ku shiraya Burco iyo Diyaargarowga lagu Baaqay - Wargane News
Home Somali News War Deg Deg Ah: Somaliland iyo Khaatumo oo ku shiraya Burco iyo...
Waxa Bisha 10aad ee sanadkan la filayaa in xukuummada Somaliland iyo Kooxda Khaatumo ay ku shiraan Magaalada Burco ee Gobolka Togdheer ayaa waxaa diyaar garow wanaagsan laga dareemayaa Laamaha kala duwan ee dawlada Somaliland.
Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye Muuse Biixi ayaa sheegay in si wayn loogu diyaar garoobo shir ay dawlada Somaliland la galayso beelaha Dhul bahante ee mudada badan ka maqnaa qaranimada Somaliland.
“Shirka bisha October ka bilaabmaya Burco qaran ahaan waa in si wayn loogu diyaar garoobaa, wuxuu la mid noqonayaa shirarkii Somaliland qabyo ka ahaa dhismaheeda”ayuu yidhi Muuse Biixi oo ka hadlay Xaflad uu xilka kula wareegayay wasiirka Cusub ee arrimaha Gudaha Somaliland.
Guddoomiyaha Kulmiye waxaa uu shirka ku tilmaamay mid la mida ah shirarkii lagu dhisay qaranimada Somaliland“Dadka reer Sool iyo Sanaag Berri wixii yaraa ee innaga dhaxeeyay waxaanu jecelnahay inuu shirkaasi kusoo dhamaado, waxaanu kusoo dhamaanayaa hadba inteenii hore u wada joogtay sida ugu diyaar garowdo”
Shirkan ayaa noqonaya shirkii ugu horeeyay ee xukuummada Somaliland ay la gasho beelaha degan gobolada Sool iyo Sanaag barri tan iyo markii lagu dhawaaqay qaranimada Somaliland sanadkii 1991kii.
Inta badan dadka degan goboladaasi waxay ka cowdaan qaab saami qabsiga dawlada Somaliland iyagoo marar badana isku dayay inay sameystaan maamul u khaas ah oo ka tirsan maamulada somaliya, balse waxaa arrintaasi kasoo horjeesatay xukuummada Somaliland oo sheegtay inay leedahay dhulka ay maamulka kaga dhawaaqeen dadka degan Gobolada Sool iyo Sanaag Barri.
Wasiiro ka tirsan kooxda Khaatumo oo ku dhawaaqday maamul goboleedka ayaa dhawaan shir wada tashi kula yeeshay magaalada Caynabo wasiiro ka tirsan xukuummada Somaliland kuwaasi oo isku afgartay in shir la iskugu yimaado Bisha Tobnaad Magaalada Burco ee Gobolka Togdheer.
Shirkaasi waxaa la filayaa inay ku heshiiyaan kooxda Khaatumo iyo dawlada Somaliland iyadoo labada dhinacba ka muujinayaan natiijo wanaagsan oo kasoo baxda shirkaas, si bulshada deegaanadaasi ku nooli u helaan dawlada wanaagsan oo taaba galisa horumarka iyo noloshada aasaasiga ah ee deegaanadaasi.